Liverpool oo ku tartameysa adeega Kylian Mbappe.
Home Horyaalka France Liverpool oo ku tartameysa adeega Kylian Mbappe.
Kooxda liverpool ayaa dagaal adag u galeysa sidii ay ku heli leheed xidiga wadanka faransiiska ee kylian Mbabppe Kooxda difaacaneysa Premier League ee Liverpool ayaa si dhab ah ugu tartameysa inay Kylian Mbappe kala soo wareegaan Paris Saint-Germain, iyadoo Jurgen Klopp uu ku cadaadinayo heshiiska xidigaan.
22-jirkan ayaa lagu doodi karaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu da’da yar kubada cagta adduunka isagoo horey u dhaliyay 137 gool oo kooxda ugu sareysa 219 kulan oo uu saftay Waxaa loogu magac daray weeraryahanka labaad ee adduunka ugu fiican 90min wuxuu ku guuleystay afar koob oo Ligue 1 ah ilaa maanta waana da’yarka labaad ee abid dhaliya finalka Koobka Adduunka.
Heshiiska Mbappe ayaa dhacaya xagaga 2021 Bappe ayaa leh 16 gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan Real Madrid ayaa muddo dheer u diyaar garoobeysay inay u dhaqaaqdo weeraryahanka haddii markii uu go’aansado inuu ka tago kooxda PSG, halka Liverpool ay haatan kusoo biireen doonistiis waana wax suurto gal ah inuu u dhaqaaqo Sida laga soo xigtay weriyaha CANAL + Geoffroy Garetier.
Previous articleChelsea oo wadahadalo heshiis kordhin ah la furaysa laba xiddig oo kooxda 1-aad ah
Next articleIksu aadka wareega Sideeda Copa del rey oo la sameeyey.